Archdiocese of Mandalay blog: အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၁၂)
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၁၂)
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၁၁)
ထိုကျောင်းတော်ကြီး၏ ကျောင်းဒါယကာ ဒါယိကာမတို့အားလည်း ဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် ယင်းတို့၏ အမည်စာရင်းကို ကဗည်းထိုးကာ မှတ်တမ်း တင်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုကျောက်စာကို လက်တင်ဘာသာဖြင့် ၄င်း၊ အာမေးနီးယမ်းဘာသာဖြင့် ၄င်း၊ အသီးသီး ဘာသာစကား နှစ်ရပ်ဖြင့် ရေးထိုး မှတ်တမ်းပြုခဲ့သည်။ ဒါယကာကြီး နီကောလာစ် မိသားစုမှ လှူဒါန်းထည့်ဝင်ငွေ ပမာဏမှာ ယင်း ခေတ်ကာလတန်ဘိုး ကျပ်ငွေ ခြောက်သောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသည့် အလွန် မွန်မြတ်သော ကညာမာရီယားသခင်မ၏ ကျောင်း ဗိမာန်ကြီးသည် ယနေ့ထက်တိုင် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ မဟာ ရန်ကုန်မြို့တော်မှ သန်လျှင်တံတားကြီးကို ဖြတ်ကျော်လျက် တဖက်ကမ်းသို့ရောက်လျှင် ရောက်ချင်း လက်ယာဘက်ရှိ ယနေ့ ဘီ၊အို၊စီ မြန်မာ့ရေနံ ကွင်းကြီးထဲတွင် တောင်ကုန်းမြင့် ကလေးတစ်ခုပေါ်၌ ဤကျောင်းတော်ကြီးသည် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ နှစ်ကာလ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် အမိုးများ မရှိ အုတ်နံရံ လေးဘက် လေးနံသာ ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့မြင်ကြရသည်။ ထိုသိုိ့ ယိုယွင်းပျက်စီးနေသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆောင်တွင်း၌ လက်တင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် ကျောက်စာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်သေးသည်။
BEATAE MARIAE VIRGINI
SINE LABE CONCEPTAE
NIC0LAI DE AGUALAR
ET MARGARITAE CONJUGIS
AERE EXTRUCTUM EST
ANN0 DOMINI SANCTO
အထက်ပါ ကျောက်စာကို အောက်ပါအတိုင်း မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆို အပ်ပါသည်။
အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသည့် အလွန် မွန်မြတ်သော
နီကောလိုင် ဧဧ အာဂွာလာ
ဇနီး မာဂရိတား တို့က
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၅၀ ခုနှစ်တွင်
တည်ဆောက် လှူဒါန်း ပြီးစီးခဲ့သည်။
သံလျင်ဘုရားကျောင်းဝင်း အတွင်း၌ အလွန် ခန့်ညား တင့်တယ်လှသည့် မယ်တော်ဘုရား ရှိခိုး ကျောင်းတော်ကြီး အပြင်၊ ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများ ကျောင်းတိုက်နှင့် မိဘမဲ့ ကလေးများအတွက် ဂေဟာဆောင်များကိုလည်း တပြိုင်တည်း တွေ့ရှိရသည်။ မိဘမဲ့ ကလေးများ အတွက် ဆောက်လုပ်ထားသော ကျောင်းဆောင်ကြီးမှာ (၂)ဆောင် အပြိုင် အဆောက်အဦးကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းကြီး အပေါ်ထပ်တွင် အခန်းပေါင်း (၈)ခန်း ရှိပြီး၊ စင်္ကြန်နှစ်ခု ဖွင့်ထားလျက်ရှိသည်။ ဤကျောင်းဆောင်ကြီးတွင် ကျောင်းသားဦးရေ (၄၀)ကျော်ကို ထားရှိနိုင်သည်။ ကျောင်းဆောင်ကြီး၏ အောက်ထပ်တွင်မူ ကိုရင်ကြီး အန်ဂျေလို ကာပဲလို၏ ဆေးပေးခန်း၊ အထွေထွေ အခမ်းအနားများ အတွက် အသုံးပြုရန် ခမ်းမဆောင် တစ်ဆောင်နှင့် မီးဖိုဆောင် တစ်ဆောင်ရှိသည်။ အောက်ထပ်၌လည်း စင်္ကြန်ဖြင့် ၀ိုင်းရံ ပတ်လည် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် အဆိုပါ ကျောင်းဆောင်ကြီးအား ယောက်ျားလေးများ အတွက် အသုံးပြုစေပြီး မိန်းကလေးများအတွက် နောက်ထပ် ဘော်ဒါ ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောက်ကို ထက်မံ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းဆောင် အသီးသီးသည် အလည်ဗဟိုရှိ မယ်တော်ဘုရား ရှိခိုး ကျောင်းတော်ကြီးကို ၀ိုင်းရံထားကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ သန်လျင် ကျောင်းဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးသည် အထူးပင် ကြီးကျယ် ခန့်ညားပြီး ကျက်သရေ အပေါင်းနှင့် ဝေဆာလျက် ရှိပေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီ အနေဖြင့် သန်လျင်ကျောင်းတော်ကို အောက်မြန်မာပြည် ကက်သလိခ် သာသနာတော်၏ ဗဟိုဌာနချုပ်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် မြန်မာ့ပညာရေး လောကအတွက် ရှေးဦး အကျဆုံးဖြစ်သော ဆရာ အတတ်သင်ကျောင်းကိုလည်း စတင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၄င်း ဆရာအတတ်သင်ကျောင်း၌ ပြဌာန်းထားသော ပညာရေး ဘာသာရပ်များမှာ မြန်မာစာ၊ မွန်စာ၊ ဘာသာပြန်၊ ဂဏန်းသင်္ချာ၊ ပထ၀ီ၊ ရေကြောင်း အတတ်ပညာနှင့် အခြားသော ၀ိဇ္ဖာ/သိပ္ပံပညာရပ်များကို ခေတ်မီစွာ စနစ်တကျ စီစဉ်ရေးဆွဲ၍ သင်ကြား ပို့ချပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆရာအတတ်သင် ကျောင်းဆင်းများကို မိမိကျောင်း၌ပင် ပြန်လည် အလုပ်ခန့်အပ် ပေးခဲ့လေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် အဆိုပါ ကျောင်း၌ မိမိကိုယ်တိုင် စာချ ပုဂိုလ်အဖြစ် ထမ်းရွက်ခဲ့လေသည်။ မြန်မာစာနှင့် မွန်စာတို့ကို ကျောင်းသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် လက်ခံ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
သန်လျင်ကျောင်းတော်တွင် လောကီအတတ်ပညာများ သာမက၊ ဘာသာရေး စာပေများကိုလည်း အထူး ကျစ်လစ်စွာ သင်ကြား ပို့ချပေးခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော် သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ ဓမ္မသီချင်းများ သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ အခြားသော ဘာသာရေးစာပေများကိုလည်း သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ ပြုခဲ့လေသည်။ အဆိုပါ ဘာသာရေး စာပေများကို ဘုန်းတော်ကြီးနယ်ရီးနီ ကိုယ်တော်တိုင် မြန်မာ-မွန်ဘာသာသို့ ပြန်ဆို ရေးသား ပြုစုပေးထားသည်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများနှင့် နောင်တွင် ရောက်ရှိလာကြမည့် သာသနာပြုများ အသုံးပြုရန်အတွက် ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် မြန်မာအဘိဓာန်နှင့် မွန်အဘိဓာန်စာအုပ်များကိုလည်း ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။
ကိုရင်ကြီး အန်ဂျေလို ကာပဲလိုသည်လည်း မိမိအခန်းကဏ္ဍမှ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းသား ကလေးများအတွက် လက်သမား အတတ်ပညာကို သင်ကြားပို့ချပေးပြီး ၊ မိန်းကလေးများအတွက်မူ အတတ်ပညာရပ်များ ဖြစ်သော ယက်ကန်း အတတ်ပညာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ခပေးခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ သန်လျင်မယ်တော်ကျောင်းသည် လက်မှု အတတ်ပညာရပ်များ ထွန်းကားရာဌာန အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၄င်းအပြင် ကိုရင်ကြီးကာပဲလို၏ ဆေးပေးခန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူထု ကျမ်းမာရေး အခန်းကဏ္ဍအတွက်လည်း အထူး အကျိုးပြု သယ်ပိုးထမ်းရွက်ပေးခဲ့သည်။ ဆေးပေးခန်း၌ လိုအပ်သော ဆေးဝါးများအတွက်မှု ကိုရင်ကြီး ကိုယ်တိုင် ဖော်စပ် အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။
သန်လျင် မယ်တော် ကျောင်းတော်ကြီးသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲလမ်း သဘင်များ၊ ဘာသာရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစရှိသည်များကို မကြာခဏ ကျင်းပ ဆောင်ရွက် ပေးလေ့ရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် တရားဓမ္မ ဟောပြောရာ၌ အလွန် ကျွမ်းကျင် ထက်မြက်စွာ ဟောပြောနိုင်သဖြင့်၊ ဘာသာရေး လေ့လာသူများနှင့်လည်း ပြည့်ကျပ်လျက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဘာသာရေးလေ့လာသူများကို အယုတ်အလပ် မရွေ့းကြိုဆို လက်ခံလျက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် သဘောထား ဖြူစင်စွာဖြင့် ဖြေရှင်း သွန်သင်ပြောပြလေ့ရှိသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီ၏ အထူး ပေါ်လွင်သော အခြားလုပ်ဆောက်ချက် တခုမှာ ဘုန်းတော်ကြီးသည် ဘာသာရေးပွဲတော်များကို အထူး စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပေးလေ့ရှိသည်။ နံနက်ပိုင်းတွင်ပွဲတော် မစ္ဆားပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ရာ၌ အထူး လေ့ကျင့်ထားသော ဓမ္မသီချင်းဆို ကွာရာအဖွဲ့နှင့်သံသာ ကြည်နူးစွာ သီဆိုစေသည်။ ညနေပိုင်းတွင် ဘာသာဝင်များနှင့်အတူ မြို့တော်တွင်းသို့ဘုရား စီတန်း လှည့်လည်ခြင်းများကို အလွန်စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထိုသို့ ဘုရားလှည့်လည်ရာ၌ ဥရောပတိုက်များတွင် ကျင့်သုံးလေ့ရှိသော ၀ိနည်း အစီစဉ်များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည်။ ဆာလံကျမ်းများကို သီဆိုခြင်း၊ ဓမ္မတေးများကို ကျူးရင့် စေခြင်း၊ စိတ်ပုတီးစိတ်ခြင်း၊ အစရှိသော ကက်သလိခ်ဘာသာ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည်။ ဘုရားစီတန်း လှည့်လည်ရာ လမ်းမတလျှောက်လုံး၌ အခမ်းအနားများကို အလွန် လှပစွာ ပြင်ဆင်ထားသဖြင့် ဘုရားလှည့်လည် စီတန်းခြင်းကို မြင်ရသူတိုင်းအတွက် အထူး ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ကောင်းလှပေသည်။ စက္ကရမင်တူးများ ပေးသော အခမ်းအနားများကိုလည်း လူအများ သဘောပေါက် နားလည်စေရန် လူထုပရိသတ် အများ ရှေ့ မျက်မှောက်တွင် ပြုလုပ် ကျင်းပပေးလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ဆေးကြောခြင်း နှင့်ထိမ်းမြားခြင်း စက္ကရမင်တူးများ ပေးရာ၌ ပညာပေး အစီစဉ်များ ထည့်သွင်းပေးပြီး လူအစုဝေးများ ရှေ့မျက်မှောက်မှာပင် ပြုလုပ် ကျင်းပပေးလေ့ရှိသည်။
ကိုရင်ကြီး ကာပဲလိုသည်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးအား ဘာသာရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ၌ များစွာ အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ဘာသာတရားကို စိတ်ဝင်စား၍ ဘာသာထဲသို့ ၀င်ရောက် လိုသူများအား အခြေခံဘာသာရေး အသိတရားများကို သင်ကြား ပို့ချပေးသည်။ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပဌနာတော်များကို သင်ကြား ပို့ချပေးရသည်။ ကိုရင်ကြီး၏ သင်ကြားပို့ချချက်များကို အောင်မြင်စွာ သင်ယူပြီးမှသာလျှင် ဘာသာထဲသို့ ၀င်ခွင့်ပြုသည်။ ဆေးကြောခြင်း ပေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုရင်ကြီးအနေဖြင့် အထူး အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် အခြေခံ ဘာသာရေး သဘောတရားများ သင်ကြား ပို့ချပေးမှူ တာဝန်ကို ထမ်းရွက်ပေးရသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးနှင့်ကိုရင်ကြီးတို့၏ မနားမနေ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကြောင့် သန်လျင်မယ်တော် ကျောင်းတော်ကြီးသည် သာသနာတော်ဌာနချုပ် စံချိန်ကိုများ မကြာမီ အချိန်ပိုင်းမှာပင် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ဖြစ်မြောက်လာရခြင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးနယ်ရီးနီသည် လုပ်ငန်းများကို နေ့မအား၊ ညမနား ထမ်းဆောင် ပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် ဆီမီးခွက် မီးရောင်အောက်တွင် ညဉ့်နက်သည်တိုင် ထိုင်၍ နေ့စဉ် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော ကျောင်းကန် တာဝန်၊ ပညာရေး တာဝန်များကို မလစ်မဟင်းအောင် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ မအိမ်မနေ၊ မနားမနေ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် အတွက်ကြောင့်လည်း စစ်တလင်း ဖြစ်ခဲ့ရသော သန်လျင်မြို့ ကလေးသည် မေတ္တာ ရေစီးကြောင်းများ အသွင်သွင် စီးဆင်းသည့် အေးချမ်းသာယာ လှပသော မြို့ ကလေး အသွင်သို့ တဟုန်ထိုး ကူးပြောင်းလာခဲ့နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဲခူးမြို့တော်တွင်လည်း ဘုန်းတော်ကြီး မွန်ဒယ်လီ တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘုရားကျောင်းကန်များသည် အထိန်းအကွပ် မရှိခဲ့သဖြင့် ပျက်စီး ယိုယွင်းမူများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် ပဲခူးသို့လည်း သွားရောက်ရပြီး ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပျက်စီး ယိုယွင်းနေသော ကျောင်းဆောင်များ ပြုပြင်ရေးလုပ်းငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။ ရပ်ဝေးရပ်နီးမှလည်း ဘုန်းတော်ကြီးအား လာရောက်ပင့်ဖိတ်ကြသည်။ ထားဝယ်မြို့စား ကိုယ်တိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအား လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟု ကတိက၀တ်များပေး၍ မိမိနယ်မြေသို့ ကြွမြန်းလာပါရန် ပင့်ဖိတ် ခေါ်ခဲ့သည်။ ဟိုင်းကြီးကျွန်းရှိ ဗြိတိသျှတို့ ကလည်း မိမိတို့ ထံ လာရောက် တရားဓမ္မကြွရောက် ဟောကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ စာချွန်လွှာများ ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဘုန်းတော်ကြီးနယ်ရီနီသည် မိမိနေရပ်နှင့်ရပ်ဝေးများ ပါ မကျန် သွားလာ လှူပ်ရှား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေရသည်။ အလုပ်များ မနိုင် မနင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မိမိအား တာဝန်ခွဲဝေ ထမ်းဆောင်ပေးမည့် လုပ်အားသစ်များ အပူတပြင်း လိုအပ်လာခဲ့သည်။
ဤလုပ်ငန်း ပြသာနာရပ်ကို ရေတို ဖြေရှင်းပေးရေးအတွက် သန်လျင်ကျောင်းတော်၌ ဆရာအတက်သင် ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကျောင်းတော်မှ သင်တန်းဆင်းများသည် မိမိအား အထိုက် အလျောက်သာလျှင် ကူဖော်လောင်ဖက် အဖြစ် အကျိုး ပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး၏ အဓိက လိုအပ်သော လုပ်အားသစ်များမှာ ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အီတလီပြည်သို့ ရဟန်းတော်များ ဆက်လက် စေလွှတ်ပေးရေးအတွက် ပန်ကြားလွှာများကို အလီလီ ရေးသားပေးပို့ခဲ့ရတော့သည်။
သာသနာအမှုတော်ဆောင် သစ်လွင်များ ရောက်ရှိလာခြင်း
သက္ကရာဇ် ၁၇၅၄ ခုနှစ် အရောက်တွင်၊ ရောမမြို့ သာသနာပိုင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘယ်နယ် ဒိတ် (၁၄) Pope Benedict XIV သည် မြန်မာပြည်မှ တောင်းဆိုထားသော သာသနာပြုသစ်များ အတွက် စီမံ ခန့်ခွဲ ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဘားရ်နားဘိုက်အသင်း ဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး ( ၄ )ပါးကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် မြန်မာပြည် သာသနာနယ်မြေအတွက် ခန့်အပ်လိုက်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာပြည်၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိသော ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီအား မြန်မာပြည် ကက်သလိခ်သာသနာအတွက် ဆရာတော်အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်သည့် စာချွန်လွှာကိုပါ တပါတည်း ပေးပို့လိုက်သည်။(၁၆) မြန်မာပြည်သို့စေလွှတ်ခြင်း ခံရသော ဘားရ်နားဘိုက်သာသနာပြု (၄) ပါးတို့မှာ အောက်ပါ ပုဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်။
၁။ ဘုန်းတော်ကြီးဗင်ချင်ဆို ကာစာနိုးဝါး Fr. Vincenzo Casanova
၂။ ဘုန်းတော်ကြီးလေအို လင်းဒါးမန်း Fr. Leo Lindermann
၃။ ဘုန်းတော်ကြီးအာမာဒေအို ဂါဇဲရီ Fr. Amadeo Gazzeri
၄။ ဘုန်းတော်ကြီးဟာမင်းဂဒ် ကွာဒြီယို Fr. Hermingild Quadrio
အဆိုပါ ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုအဖွဲ့ (၄)ပါးတို့သည် အဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့ခွဲ့၍ သက္ကရာဇ် ၁၇၅၄ ခုနှစ်တွင် အီတလီပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးနယ်ရီးနီ၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ မစ္စတာ ပီတာသည် သန်လျင်မြို့ သီတင်းသုံးနေထိုင်သော မိမိ ညီတော်အတွက် ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းများဖြစ်သော ဘုရားဝတ်ပြုချိန် အသုံးအဆာင်ပစ္စည်းများ။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ စာသင်ကျောင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၊ လက်သမားပစ္စည်းများကို ပေးပို့လိုက်သည်
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း (၁၃)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:01 AM